21-04-22 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီဇယ်မီးစက်များ၏လောင်စာသုံးစွဲမှုကို ၀.၂ မှ ၀.၂.၂၅kg / kW.hour တွက်ချက်သည်။ ဒီဇယ်တစ်လီတာသည် ၀.၈၄ မှ ၈.၈၆ ကီလိုဂရမ်ရှိသည်။ ထို့နောက်တစ်နာရီလျှင် 1KW ၀.၂၀.၂.၂၅ ကီလိုဂရမ်ကို ၀.၈၄ = ၀.၂၃၈ လီတာ -၃၃ လီတာဖြင့်စားသည်၊ တစ်နာရီလျှင်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုနှင့်ကီလိုဝပ်ဝပ်ဖြင့်မြှောက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 0
မတ်လတွင်တရုတ်၏စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ကုန်သွယ်မှုဆက်လက်ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး၊ ပထမရာသီတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်များ၏ပို့ကုန်ပမာဏ ၄၃% တိုးတက်ခဲ့သည်။
21-04-20 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အခြေစိုက်စခန်းနိမ့်ကျခြင်း၊ ပြည်ပမှ ၀ ယ်လိုအားပြန်လည်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏တိုင်းပြည်၏ရောင်းအားအားသာချက်များစသည့်အချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်၏တိုင်းပြည်၏စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ကုန်သွယ်မှုသည်မတ်လတွင်ဆက်လက်တိုးတက်ခဲ့သည်။ အကောက်ခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှထုတ်ပြန်သောကိန်းဂဏန်းများအရ ...
အထူးသဖြင့်ဒီဇယ်စက်၏အမြန်နှုန်းမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ပန်ကာဓါးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုသောကြောင့်ဒီဇယ်ထုတ်လုပ်စက်သည်အလုပ်လုပ်သောအခါပန်ကာဓါးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုသည်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးကိုပန်ကာလို့ခေါ်တဲ့အရွက်တွေရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အသံ။ ⑴ ... ...
ဒီဇယ်မီးစက် set ပန်ကာခါးပတ်ချော်
ဒီဇယ်မီးစက်တပ်ဆင်ထားစဉ်အခါအားလျော်စွာကြိမ်နှုန်းမြင့်၊ ချွန်ထက်။ စဉ်ဆက်မပြတ်“ squeak -” သံကိုပြုလုပ်သည်။ လောင်စာဆီအမြန်ပြေးသောအခါအသံသည် ပို၍ ထင်ရှားသည်။ ၎င်းမှာစက်သီးစလစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ⑴အကြောင်းရင်း fan ပန်ကာသို့မဟုတ်လေစုပ်စက်၏ခါးပတ်တင်းမာမှုသည်မလုံလောက်ပါ။
21-03-06 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
၁။ ရေနံစီးဆင်းမှု၏လေထု the ဖိအားနိမ့်လောင်စာပိုက်လိုင်း၏သွေးထွက်နေသောမူလီကိုလျှော့ချပြီးဖိအားနိမ့်ရေနံပိုက်လိုင်းတွင်လေပူဖောင်းများမလျှံမ ၀ င်မှီလောင်စာလွှဲပြောင်းစုပ်စက်၏ခလုတ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲ နှိပ်၍ သွေးထုတ်ယူပါ။ မူလီ high ဖိအားမြင့်လောင်စာဆီပိုက်ကိုလျှော့။ စတင်ပါ။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွင်းမှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရေနံဆီမလုံလောက်ခြင်း။ ရေရှည်အသုံးပြုပြီးနောက်လောင်စာဆီစုပ်စက်၏ drive coupling တွင်ကွာဟချက်များလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်ကြီးမားလွန်းခြင်းတို့ကြောင့် drive ဂီယာ ၀ တ်နေပြီး backlash တိုးပွားလာသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆလင်ဒါ၏ရေနံထောက်ပံ့ရေး။ အပြင်ယိုစိမ့်မှု ...
21-03-03 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
အကယ်၍ ဒီဇယ်စက်၏ဆလင်ဒါတစ်ခုချင်းစီ၏လောင်စာသည်မမျှတပါက (ဥပမာ၊ အချို့သောဆလင်ဒါများ၏လောင်စာသည်အလွန်ကြီးမားပြီးအချို့သောဆလင်ဒါများ၏လောင်စာသည်အလွန်နည်းသည်) ဒီဇယ်မီးစက်၏တည်ငြိမ်မှုကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်လိမ့်မည်။ စစ်ဆေးခြင်းအတွက်လောင်စာဆီ pump ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
21-02-02 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
မီးစက်များတပ်ဆင်ရာတွင်ဆူညံသံထိန်းချုပ်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဆူညံသံအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ရွေးချယ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ၁။ မီးခိုးထွက်နေသောမီးခိုးငွေ့ - မီးခိုးငွေ့ငွေ့သည်ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ဆူညံသံကိုလျော့နည်းစေသည်။ အမျိုးမျိုးသောတိတ်ဆိတ်နေသောအဆင့်များသည်မတူညီသော sile များရှိသည် ...
"အဟောင်းကိုချိုးဖျက်နှင့်အသစ်ကဖန်တီးရန်, သင်ယူဖို့ခက်ခဲပြီးလုပ်ဖို့လွယ်ကူသည်။ " ခေတ်ကာလပြောင်းလဲမှုတိုင်း၏နောက်ကွယ်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးကြောနေသည်။ Dongfeng Cummins L9 National VI မီးစက်သည်ခြွင်းချက်မရှိပါ။ အတူတူဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမီးမောင်းထိုးပြ ...
21-01-31 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
၁။ ဒီဇယ်စက်ကိုမစတင်မီ ၁) လေဝင်လေထွက်သေချာစေရန်ဒီဇယ်မီးစက်အခန်း၏တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များကိုဖွင့်ပါ။ ၂) dipstick ကိုထုတ်။ ဆီပမာဏကိုစစ်ဆေးပါ။ အမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်အကန့်အသတ် (ဆန့်ကျင်ဘက်မြှားနှစ်ခု) အကြားဖြစ်သင့်သည်ထည့်သွင်းဖို့မလုံလောက်။ ၃။ လောင်စာဆီပမာဏစစ်ဆေးပါ၊
လေး stroke ဒီဇယ်မီးစက်၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်နိယာမ
21-01-30 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
1. လေဖြတ်ခြင်းလေလတ်ဆတ်သောလေကိုဒီဇယ်ဂျင်နရေတာမှလိုအပ်သောလေကိုထောက်ပံ့ရန်ဒီဇယ်မီးစက်၏ဆလင်ဒါထဲကိုထည့်ပါ။ 2. Compression Stroke ဒီဇယ်မီးစက်၏အ ၀ င်နှင့်ထွက်ပေါက်အဆို့ရှင်များကိုပိတ်ထားပြီး၊ piston သည်ရွေ့လျားသွားသည်။ ဆလင်ဒါရှိဓါတ်ငွေ့သည်လျင်မြန်စွာချုံ့သည်။ လေ ...
●ကလေးများအားမီးစက်နှင့်မကပ်ပါစေနှင့်။ ●ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင်တည်ငြိမ်သောစတင်အရည်ကိုမသုံးပါနှင့်။ ●မီးစက်၏အခန်းအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါထွက်သွားပါကမီးစက်ကိုမထားပါနှင့်။ သို့မဟုတ်ပါကမီးစက်၏အစိတ်အပိုင်းများသည်ကွေး။ ကွဲသွားနိုင်သည်။
Tel: + 86-18059007868
©မူပိုင်ခွင့် - ၂၀၁၀-၂၀၂၂ ။